Umakhi weKhowudi ye-QR: UYila njani kwaye ulawule iiKhowudi ezintle zeQR zeDijithali okanye uShicilelo | Martech Zone
Umakhi weKhowudi ye-QR: Indlela yokuYila kunye nokulawula iiKhowudi ezintle ze-QR zeDijithali okanye ukuPrinta
NgoLwesibini, Matshi 1, 2022 NgoLwesibini, Matshi 1, 2022 Douglas Karr
Omnye wabaxumi bethu unoluhlu lwabathengi abangaphezu kwe-100,000 abathumele kubo kodwa abanayo idilesi ye-imeyile yokunxibelelana nabo. Sikwazile ukwenza isihlomelo se-imeyile esihambelana ngempumelelo (ngegama kunye nedilesi yeposi) kwaye siqale uhambo olwamkelekileyo olube yimpumelelo. Abanye abathengi abangama-60,000 singabo ukuthumela iposikhadi ukuya ngolwazi lwabo olutsha lokuphehlelelwa kwemveliso.
Ukuqhuba ukusebenza kwephulo, sibandakanya a QR ikhowudi ene-UTM yokulandelela kuyo ukuze sikwazi ukubeka iliso inani leendwendwe, ukubhaliswa, kunye nokuguqulwa kwiphulo le-imeyile ngqo. Ekuqaleni, bendicinga ukuba le iya kuba yinkqubo elula, kodwa ukongeza ikhowudi ye-QR esekwe kwivektha bekuyingxaki endiyicingayo. Njengawo wonke omnye umngeni, kukho isisombululo phaya… Umenzi weKhowudi yeQR.
Kukho iindlela ezininzi zokusetyenziswa kweekhowudi ze-QR ngaphandle kwe-imeyile ngqo esiyenzayo, ungabandakanya iikhowudi ze-QR ku:
Nika ikhowudi yekhuphoni okanye isaphulelo.
Yakha i-vCard ukuze iindwendwe zikhuphele iinkcukacha zakho zoqhagamshelwano.
Ikhonkco kwiPDF ekwi-intanethi.
Vula iaudio, ividiyo okanye ukhenketho lwefoto kwi-intanethi ukusuka kwimiqondiso.
Cela ukukala okanye uqokelele ingxelo.
Nikezela ngemenyu engachukumisiyo kwindawo yakho yokutyela (oku bekudume kakhulu ngexesha lobhubhane).
Nikeza ngeekhowudi ze-QR ezithe ngqo kwimathiriyeli yakho yoshicilelo.
Okona kulungileyo, unokulandelela ukusetyenziswa kweekhowudi zakho zeQR kwaye udibanise Ukulandelela umkhankaso we-analytics kwii-URLs ngokunjalo. Bendingasoloko ndithengiswa ngeekhowudi ze-QR kuba bebefuna ukuba ukhuphele usetyenziso ixesha elide, kodwa ngoku abafundi bekhowudi ye-QR bazenzekela kuzo zombini ii-iPhones kunye nee-Android xa usebenzisa ikhamera. Oko kubenza babe mnandi ukudibanisa naphi na apho abasebenzisi bakho banesixhobo esiphathwayo kwaye ufuna ukunxibelelana nabo ngokwedijithali.
Iimpawu ze-QR Code Generator
Umenzi weKhowudi yeQR yimveliso ye Bit.ly, enye yezona ndawo zidumileyo zokuCwangcisa i-URL yamaqonga. I-QR Code Generator sisisombululo esinye sokumisa abathengisi, inguqulelo yePro ibandakanya:
Lawula -Unokulawula zonke iikhowudi zakho ze-QR kwiqonga elinye eliphakathi, elibandakanya ukukwazi ukubhala kunye nokulawula nganye yeekhowudi kwifolda yayo.
Bambisana -unokongeza amalungu eqela ngokungena kwawo kwaye usebenzisane nawo kuyilo okanye wabelane ngengxelo.
umyili -umyili unengqiqo, ekuvumela ukuba uyile iKhowudi ye-QR eyenzeka ngokwezifiso ebandakanya umbala, uphawu (ilogo), kunye nokwenza ngokwezifiso ukubizelwa esenzweni.
Imihla yokuLungisa Iikhowudi ze-QR zinamaphepha akhelwe ngaphakathi enzelwe ukubonisa kwiselfowuni, ithebhulethi, okanye idesktop.
URL short -iqonga line-URL yesifinyezi esibandakanyiweyo ukuze ungabi naxhala malunga nokunciphisa i-URL ngaphambi kokusebenzisa iqonga.
Uhlalutyo -inani lekhowudi ye-QR yokuskena ifakiwe kwiqonga kwaye ungathumela ngaphandle idatha kwifayile ye-CSV.
Ababonisi -Ufuna ukusebenzisa ikhowudi ye-QR ukuprinta? Akukho ngxaki - unokukhuphela ikhowudi ye-QR kwiifomathi ezininzi - kuquka i-PNG, i-JPG, i-SVG, okanye i-EPS (eMnyama kunye nomhlophe ngaphandle koyilo olongezelelweyo).
API -Ufuna ukudibanisa ii-APIs kwiqonga lakho? Bane-REST API epheleleyo yaloo nto!
Iziphumo zeKhowudi yeQR yoMvelisi
Nantsi ikhowudi ye-QR endiyakhe ngemizuzu embalwa nje ngeli nqaku. Ewe kunjalo, unokuba ufunda oku kwisixhobo esiphathwayo ukuze eyona URL ingezantsi kwiqhosha. Kodwa ukuba ujonge oku kwidesktop, vele ukhombe ifowuni yakho kwikhowudi ye-QR nangasiphi na isixhobo kwaye uya kubona ukuba unokuvula kwangoko i-URL yendawo yokuya kuyo.
Bhalisela uvavanyo lwasimahla lweKhowudi yeQR yesiVeli
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lam lokudibana Umenzi weKhowudi yeQR kuzo zombini ikhowudi yeQR kunye nenqaku.
tags: Bit.lyuyilo ikhowudi ye-qrileta ngqoiOSiphoneikhowudi ye-qrlawula iikhowudi zeqrurhwebo mobilePhotoshopushicileloQR CodeUmakhi wekhowudi ye-QRUmbala wekhowudi ye-QRUmyili wekhowudi yeQRIikhowudi zeQRshortcodesmfutshane we-url
Isikhokelo sokufumana ngokulula ii-Backlinks kunye nenqanaba kuGoogle usebenzisa i-AI
I-WordPress: Ukusebenzisa i-jQuery Ukuvula i-LiveChat Window ngokucofa ikhonkco okanye iqhosha usebenzisa i-Elementor.